ठेकेदारको दादागिरी, निरीह सरकार !::Nepali News Portal from Nepal
ठेकेदारको दादागिरी, निरीह सरकार !
देश कसको हातमा छ भनेर प्रश्न गर्ने हो भने यसको सहज जवाफ पाउन गाह्रो छ नेपाली जनतालाई । हुनतः मुलुकमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको भनेर ठूलो प्रचारप्रसार भइरहेको छ । अहिले कुनै पनि कुरा देशमा सहज रूपमा अगाडि बढ्दैन, सरकारले केही गर्न खोजेको देखिन्छ तर कामको शुरूवात नहुँदै विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब प्रभाव पर्छ अनि फेरि बहादुरीको साथ निर्णय फिर्ता हुन्छ । केही दिनअघि देशको संघिय संसदमा पर्वत जिल्लाका माननीय सांसद पदम गिरीले मध्यपहाडी लोकमार्गमा काम नगर्दा ठप्प भएको भनेर महत्वपूर्ण भनाई राख्नुभयो । जुन कुरा सत्य र वास्तविक थिए, जसलाई सबैले प्रसंसा गरेका छन् । जुन काम समयमै सम्पन्न गर्छु भनेर कामको जिम्मेवारी लिने ठेकेदार कम्पनीले गरे तर पटकपटक म्याद सकिँदा पनि आफुले गर्नुपर्ने काम भने सम्पन्न गरेनन् । यसलाई हेर्ने निकाय कहाँ छ ? किन ठेकेदारलाई सरकारले काम गराउन सक्दैन ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने यसको जवाफ सजिलोसँग आउँछ– ‘उहीँ कमिसन कै खेती ?’ धेरै टाढा जानुपर्छ जस्तो लाग्दैन । एकजना माननीय काम अगाडि बढेन भनेर बोलीरहँदा अर्को कामको जिम्मेवारी लिने माननीय काममा तेल हालेर बसिरहेको देखिन्छ ।
सरकारले प्रत्येक बर्ष बिकास बजेट ३० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको भनेर चिच्याईरहँदा ठेकेदार कम्पनीले न त भएको काम गर्छ न त काम गरेर भुक्तानी नै माग्छ । सरकारले गौरवशाली राष्ट्रिय योजनाको रूपमा रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको पोखरा–बागलुङ खण्डको जिम्मेवारी लामा कन्ट्रक्सनले लिएको छ । अहिले वर्षा लागेपछि काम ठप्प प्राय छ । भएको सडकमा समेत यातायात गुडाउन ब्यबसायीलाई ठूलो सकस छ । हिजो दुई घण्टामा पुग्ने बागलुङ पोखराको ७२ किलोमिटरको यात्रा ४ घण्टाभन्दा बढी लाग्ने गरेको देखेर नै सांसद गिरीले आवाज उठाएको हुनसक्छ । देशमा शक्तिशाली सरकार गठन भएको केही समयमै देशका शक्तिशाली गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायातमा भएको सिण्डिकेट हटाएर छोड्ने कसम खानुभयो तर कसम केही हप्ता पनि टिक्न सकेन । दोस्रो कसम ठेकेदारलाई आफुले लिएको जिम्मेवारी पूरा नगरे लाइसेन्स खारेज गर्ने भनेर ठूलो तामझामका साथ प्रचारप्रसार पनि गरियो तर अवस्था जस्ताको त्यस्तै । यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने आखिर सरकारभन्दा पनि शक्तिशाली बाहिरी रहेछ त्यो हो ठेकेदार कम्पनी । नेतालाई र पार्टीलाई चुनावमा चन्दा दिएबापत त्यसको साँवाब्याज एकसाथ उठाउने अभियान ठेकेदार लाग्नु स्वभाबिक नै मान्नुपर्छ । किनभने ठेकेदारले आफ्नो घरबाट पैसा ल्याएर चन्दा दिने हैसियत राख्दैन । सरकारले दिने विकासको कामलाई कमसल बनाएर पैसा असुली गर्ने धर्म नै हो । जुन धर्म अहिलेसम्म ठेकेदारले निभाउने काम गरेका छन् ।
इतिहासकै शक्तिशाली सरकार त्यो पनि सामान्य हैन पुरै दुई तिहाईको झट्ट सुन्दा कति आनन्द आउँछ । तर ब्यबहारमा भने त्यसको ठिक बिपरित देखिन्छ । एकजना ठेकेदारले जिल्लाको सिडिओ, सांसदलाई टेर्ने कुरै भएन, उसको पहुँच सिधै प्रचण्ड, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा लगायतका उच्च पदस्थ नेतासंग छ । केही महिना अगाडि मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको काम ६ महिनाभित्र सक्नको लागि बागलुङका माननीय सांसद देबेन्द्र पौडेलले चेतावनी दिएका थिए नभए कार्वाही गर्छु भनेर । तर, अहिले सांसद पौडेलले दिएको ६ महिनाको म्याद पनि सकिसकेको छ काम भने जस्ताको तस्तै छ । अहिले पनि ठेकेदार छाती फुलाएर हिडिरहेको छ, बरू चेतावनी दिने हाम्रा माननीय सांसद के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बागलुङे जनताले खोजीरहेका छन् । एकजना ठेकेदारलाई पैसा दिएर पनि काम लगाउन नसक्ने सरकारले साँच्चै देशमा परिवर्तन गर्छ भनेर कसरी बिश्वास गर्ने । अहिले देशमा संघिय गणतन्त्र घोषणा भएको छ, समाजवादमा पुग्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । जाबो एउटा दिएको काम लगाउन नसक्ने सरकार समाजवादमा पुग्छ भनेर कसरी बिश्वास गर्ने नेपाली जनताले । यो सरकार नेपाली जनताको सरकार हो भने राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत नराम्रो गर्नेलाई कार्वाही जबसम्म गर्न सकिदैन तबसम्म खोक्रो भाषणले केही हुनेवाला छैन ।